တခဏ သည် တခဏ သို့သာ ဖြစ်သည် | ZAYYA
တခဏ သည် တခဏ သို့သာ ဖြစ်သည်
ဘာဝနာ နှင့် နစ်မြုပ်နိုင် လာသည် နှင့် အမျှ အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ချက် တို့လည်း ပျောက်ကွယ် သွားရ၏။ ဘာဝနာ ၏ ဖူးပွင့်နိုင်စွမ်း အတွင်း ၌ မည်သည့် အချိန် ကာလ ကိုမျှ ရှာတွေ့နိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ ဘာဝနာသည် ယခု ခဏ ၌ အလိုအလျောက် တည်ဖြစ်ခြင်း ကိုသာ ဆိုလို သည်။ စိတ်ကူး သန္တာန် ပျောက်ကွယ် သော ခဏ ၌ ယင်း စိတ်ကူးဖြင့် ခြယ်သသော အချိန်သည်လည်း ကွယ်ပျောက်၏ ။ ထို့ကြောင့် ခေတ်အဆက်ဆက် ရှိကြသော ဒဏ္ဍာရီ တို့၌ ~ “ကာလ” နှင့် “စိတ္တ” သည် ဒင်္ဂါးတစ်ခု၏ ခေါင်းနှင့် ပန်းမှ လွဲ၍ အခြား မဟုတ်ကြောင်း~ ညွှန်းဆို ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ စိတ် အတွေးအကြံ မရှိလျှင် အချိန်ကာလ ဟူသည် မရှိ ~ စိတ် ကူး အတွေးအကြံ တို့ မရှိဘဲ အချိန်ကာလ သည် သူ့ချည်း ရှင်သန် မနေနိုင်။ စိတ်ကွန့်မြူး ရာ ပျော်စံရာ ဌာနအတွင်း၌သာ ယင်း အချိန်ကာလ တို့ ဖြစ်တည် ၏။
ထို့ကြောင့် ဗောဓိဥာဏ် ရှိကြသူတို့ မိန့်ကြားသော ဆိုစကားတို့ တွင် ~ “ပစ္စုပ္ပန် ၌သာ ရှင်သန်အပ်၏” ~ ဟု ထည့်သွင်း ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်း ပစ္စုပ္ပန်ကို ရှုမြင် ရှင်သန်ခြင်း သည်သာ “အပ္ပမာဒ”~ “မမေ့လျော့သော သတိနှင့် နေထိုင်ခြင်း” ~ “ဘာဝနာ” ဖြစ်သည်။ ယခု “ဤနေရာ/ဤအချိန်” ၌ သိမြင် ရှင်သန်နေခြင်းမျှသည်သာ ဘာဝနာ ဖြစ်သည်။ ထို ထက် ဘာမျှ မပို။ ယခု ခဏတွင် ရှိသော ~ အဝေး က ကျေးငှက်တို့၏ ဘာသာဘာဝ သီဆိုသံ သည် လည်းကောင်း ၊ လေယာဉ်ပျံ တို့ ၏ အင်ဂျင်သံ၊ ကျီးငှက် ၊ ဝါးရုံတို့ လှုပ်ခတ်သံများသည်လည်းကောင်း ~ အသင် စာရှုသူတို့ ရှုမြင်ထားသည့် ယခု ပစ္စုပ္ပန် ခဏ၌ ( လှုပ်ခတ် လျက်နှင့် ပင် ) တိတ်ဆိတ် သွားရ၏ ။ စိတ်သန္တာန် အတွင်း၌ကား လှုပ်ခတ်မှု မရှိ။ ပကတိ အငြိမ်သား တည်၏။ စိတ်အာရုံသည် အတိတ် ကာလသို့ ပြေးခို မသွား၊ အနာဂတ် ကာလသို့ လည်း ပျံ့လွင့် မျှော်လင့် မနေ။ ထို့ကြောင့် ~ အချိန်သည်လည်း ရပ်။ စိတ်လည်း ရပ်။ အသင် စာရှုသူ၏ လောကလည်း ရပ်တန့်လျက် ရှိ၏ ဟု ဆိုပါမည် ။
စင်စစ် ယင်း “ရပ်တန့် ချုပ်ပျက်သွားခြင်း” ဖြစ်စဉ်သည်သာ ဘာဝနာ၏ လေးနက်သော အနုပညာ လက်ရာ ဖြစ်သည် ဟု ဆိုပါမည်။ တခဏချင်း ၌ ပြည့်ဝစွာ နေထိုင်နိုင်သော သူသည် ထာဝရ ရှင်သန်နေသော သူ ဖြစ်ကြောင်း ကို ထိုခဏ၌ သိမြင် ရပါလိမ့်မည်။ စိတ်ကူး အတွေး မပါ ~ လက်ကတောက်ချင်း ထိတွေ့ခံစားရသည့် ယင်း တခဏ အရသာ သည် အမတ ကို မြည်းစွမ်းနိုင်သော အမြိုက် အရသာ ဖြစ်ကြောင်း လည်း မိမိကိုယ်တိုင် နားလည် သဘောပေါက် သွားပါလိမ့်မည်။
As you go deeper into meditation time disappears. When meditation has really bloomed no time is found. It happens simultaneously: when the mind disappears, time disappears. Hence, down the ages, the mystics have said that time and mind are nothing but two aspects of the same coin. Mind cannot live without time and time cannot live without mind. Time isaway for the mind to exist.
Filed under Osho Tagged with meditation, Osho, zen